Khilaafka Khaliijka iyo siduu u kala qaybiyay Soomaaliya | YoobsanNews.com
Bishii Juunyo ee sannadkan waxaa dhacay wax aysan dad badan filanynin, taas oo ahayd in saddex dal oo ka mid ah dalalka ku bahoobay Khaliijka Carabta ee hodanka in ay xiriirkii dublamaasiyadeed u jaraan dalka Qadar.
Waxaa ka mid ah Masar, Yemen, Jabuuti iyo kuwo kale oo badan, waxaana la filayay in Soomaaliyana dalalkaas ku biirto.
Balse taasi ma dhicin, golaha wasiirrada oo shir yeeshay 6dii Juunyo, 2017-kii ayaa go’aan ku gaaray in muranka Khaliijka ay dhexdhexaad ka yihiin, waxayna ku baaqeen in dalalka muransan la dhexdhexaadiyo.
Si aysan ku jirin canaan iyo cambaarayn toona, kuna qotanta luuqad dublamaasiyadeed ayay golaha wasiirada sababeeyeen go’aanka dhexdhexaadnimada.
Marka koobaad, waxaa dowlad goboleedyada la xusuusiyay qodobka 54aad ee ‘dastuurka KMG ah’ oo dowladda dhexe siinaya awoodaha qayaxan ee ay go’aan kaga gaari karto arrimaha dibedda, difaaca, muwaadinnimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagta.
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Sacad Cali Shire ayaa yiri “Somaliland iyada oo aaminsan mabaadii’da nabad ku wada noolaanshaha, iyo xasiloonida gobolka, kana soo horjeedda wax kasta oo wax u dhimmi kara nabadda iyo degenaanshaha, islamarkaasna kasoo horjeedda xagjirnimada iyo cid kasta oo taageerta, ayaa waxa ay taageertay moowqifka iyo aragtida ay ka qaateen Sucuudiga iyo Imaaraatka khilaafka siyaasiga ah ee u dhaxeeya iyaga iyo Qadar”.
Intaas kuma uusan ekaane, go’aanada kale waxaa ka mid ahaa in Somaliland ay hawadeeda ka mamnuucday in ay isticmaalaan diyaaradaha Qadar, wuxuuna wasiirka ku nuuxnuuxsaday in dowladda Soomaaliya aysan bixin karin ogolaansho lagu marayo hawada.
Waxay ahayd arrin la fahmi karay maadaamaa laga war hayo xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Somaliland iyo Imaaraatka oo la wareegay maamulka dekadda Berbera, islamarkaasna saldhig ciidan ka dhisanaya halkaas sida ku cad heshiis ay kala saxiixdeen.
Go’aanka mamnuucista hawada waxa uu ahaa mid aad u damqayay Qadar maadaama inta badan duulimaadyadii shirkadda diyaaradaha ee Qadar Airways laga mamnuucay hawada Sucuudiga iyo Imaaraatka loosoo wareejiyay hawada Soomaaliya. Balse dhaqangalka go’aanka Somaliland ee hawada ayay dad badan su’aal ka keeneen.
Puntland iyo Imaaraatka waxaa muddooyinkii dambe dhexmaray xiriir aad u dhow, waxaana jiray heshiis sannadkan dhexdiisa la saxiixay oo shirkad Imaaraatka laga leeyahay ay kula wareegayso maamulka dekada Boosaaso.
Dowladda federaalka kama aysan hadlin go’aankaas, kamana aysan jawaabin dalabkii Puntland ee ahaa in ay ka laabato moowqifkeeda ku aaddan khilaafka khaliijka.
18-kii bishan Sabtembar, 2017-ka ayaa war qoraal ah oo kasoo baxay madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa waxaa isna lagu sheegay in xiriirka loogu jaray Qadar, laguna waafaqay moowqifka Sucuudiga iyo Imaaraatka ee Qadar.
Koonfur Galbeed ayaa ku doodayso in inkasta oo dowladda federaalka awood u leedahay go’aannada siyaasadda arrimaha dibedda, haddana ay dhanka kale tahay in maamul goboleedyadana la wargaliyo, lalana tashado.
20-ka bishan sabtembar 2017-ka, Galmudug ayaa noqotay maamul goboleedkii ugu dambeeyay ee la safta xulafada Sucuudiga iyo Imaaraatka.
Maamulada soo haray
Maamul goboleedyada aanan wali wax go’aan ah ka qaadan, islamarkaasna aanan wax hadal ah kasoo saarin ayaa ah Jubbaland iyo Hirshabeelle oo iyadu maalmo uun ka hor loo doortay madaxweyne cusub.
Warkii maanta oo khamiis ah kasoo baxay golaha wasiirada ayaa u muuqday in dowladda ay ku qasbanaatay in ay markale cadayso go’aankeeda , islamarkaasna dareentay cadaadiska kaga imanaya maamul goboleedyada.
Haseyeeshee waxaa muuqata kala qeybsanaan ballaaran ay soo kala dhexgashay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah oo ku saabsan muranka carabta.
Previous: Wasiirada Arrimaha Dastuurka Ee Dawladda Dhexe Iyo Dowlad Goboleedyada Oo Kulmay (Sawirro)
Next: Galmudug “Uma dulqaadan doonto faragelinta M/weynaha & R/Wasaaraha